प्रधानमन्त्रीको आपत्ति : शेरबहादुर देउवाजीले राष्ट्रपतिलाई ‘तिमी,’ ‘उनी,’ ‘गरिन्’ भन्ने ? – Krazy NepaL
प्रधानमन्त्रीको आपत्ति : शेरबहादुर देउवाजीले राष्ट्रपतिलाई ‘तिमी,’ ‘उनी,’ ‘गरिन्’ भन्ने ?
हामी समाजलाई असभ्य, बेथिति, संस्कारहीन समाजको रुपमा बनाउन खोजेको होइन । सुशासनयुक्त मर्यादित समाज बनाउन खोजेका हौँ ।’
Prevतीनवटै सुरक्षा निकायलाई गृहको निर्देशन, ‘निषेधाज्ञा कडा कार्यान्वयन गर्नु’
Nextछोरा या छोरी के जन्मिने ? थाहा पाउँनुहोस् यी १४ सरल घरेलु तरिका!